Goolasha.net | Archive | Dagmooyinka
Home » Archives by category » Dagmooyinka
DAAWO: Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda,maanta
kulan wacan saaxibyaal,waxaa halkaan idin kugu soo gudbin doonaa warrakii ugu danbeeyay ee ciyaaraha Somalida iyo Caalamka. HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA WARKA
DAAWO: Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda,maanta oo Axadd ah,9-10-2017
kulan wacan saaxibyaal,waxaa halkaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada maanta oo khamiis ah. HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA WARARKA
Waaberi oo ku guuleysatay Tartanka degmooyinka mudo kadib.+sawiro
Degmada kubadda cagta Waaberi ayaa ku guuleysatay tartanka degmooyinka gobolka Banadir. Degmooyinka kala ah Waaberi iyo Hodan ayaa xaley kulan xiiso badan kuwada yeeshay garoonka Banadir Stadium ee degmada Cabdicasiis waana markii ugu horeysay habeen lagu ciyaaro koonis tani iyo bur burkii. Qeybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hor kaceyso degmada […]
Deg Deg: 35-sanno kaddib Ciyaartii Fiinaalaha tartanka Degmoyinka oo la rabay in caawa la Ciyaaro oo,,,
War saxaafadeed kasoo baxay maamulka Sportiga gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in uu baaqday kulan Ciyaareedkii adkaa ee u dhexeeyay Degmoyinka Waaberi iyo si la mid ah Degmada Hodan, kaas oo ahaa kama danbaysta tartanka Degmoyinka gobolka Banaadir. Ciyaarta kama danbaysta ee Degmoyinka Waaberi iyo Hodan ayaa sida uu ahaa qorshaha xiriirka soomaaliyeed ee […]
Xasan Wiish: Waxaan Deeq Waxbarasho oo Heer Jaamcadeed ah U Helnay 129 Ciyaartoy
Guddoomiyaha Ciyaaraha Gobolka Benaadir ahna Garsoore heer Caalami Xasan Aadan Xaaji Yabarow “Wiish” oo aan la yeelannay wareysi gaar ah ayaa noo xaqiijiyay in 129-ciyaaryahan oo ka qeybgalay taranka degmooyinka gobolka Banadir ay u heleen deeqa waxbarasho oo heer jaamacadeed misna lacag la’aan ah. Illaa 129-ciyaartow oo ka mid ah 391-ciyaaryahan oo ka qeybgalay […]
DAAWO SAWIRADII: Kulankii shaley u dhaxeyay degmooyinka kala ah Hodan iyo Kaaran.
kulan ka tirsan tartanka degmooyinka gobolka Banadir ayaa galabta ka dhacay garoonka Banadir Stadium ee degmada Cabdicasiis kaa uu u dhaxeeyay degmooyinka kala ah Kaaran iyo Hodan. Ciyaartan ayaa aheyd mid aad u xiiso badan qeybtii hore ayaa lago kala nastay 1-0 ay ku horkaceyso degmada Kaaran. Markii dib la isku soo laabtay degmada Hodan […]
CODEYN: Degmadii ku guuleysan karta tartanka degmooyinka ee Gobolka Banadir Waabari vs Hodan.
Labada degmo ee kala ah Waabari iyo Hodan ayaa iskugu imaaday final-ka tartanka degmooyinka Gobolka Banadir. Waabari ayaa sanadkii saddexaad oo xariir ah imaaneysa Final-ka Degmooyinka balse nasiib daro labadaas sano waa laga qaaday koobka. Hodan waa markii ugu horeysay ay soo gaarto Final-ka Tartanka Degmooyinka. Codkada waa inuu muhiim hoos ka soo dhiibo.
DEG DEG: Degmada Hodan oo gaartay Final-ka tartanka Degmooyinka xili ay la ciyaareyso degmada.
Degmada Hodan oo u soo gudabtay wareega afaraad ee tartanka Degmooyinka 2016-17 xili ay soo xaaqday degmada….
Dhegmooyinka Hodan iyo Shibis ayaa waxa ay kulan xiiso badan ku yeesheen Banaadir Stadium xilli kulankaa u ahaa mid bug bax ah uuna ka tirsanaa kulama tartanka degmooyinka gobolka Banaadir 2017. Labada degmo oo ciyaarta dar dar xoogan kusoo galay ayaa waxaa dharbaaxada bilaawday degmada Shibis iyada oo ay goolka ka heshay xiddiga No. 10 […]
Maxaa kala heesta degmooyinka kala ah Hodan iyo Shibis.
degmooyinka kala ah Hodan iyo Shibis ayaa galabta ku balansan garoonka Banadir Stadium ee degmada Cabdicasiis kulan ka tirsan tartanka degmooyinka 2016-17. Degmada Hodan ayaa ka soo baxday Gruop-ka C- iyado ay ku dhameysatay kaalinta koowad oo ay ku hogaamineysay gool dhalin. Halka Shibis ayaa si layaab leh ugu soo baxday Gruop-ka A waxeyna ugu […]